IZINDLELA EZI-3 EZAHLUKAHLUKENE ZOKUNIKA AMANDLA I-AKHAWUNTI YOMLAWULI KU-WINDOWS 10, 8.1 NO-7 - I-WINDOWS 10
Izindlela ezi-3 ezahlukahlukene zokunika amandla i-akhawunti yomlawuli ku-Windows 10, 8.1 no-7
Njengoba wazi, ngasekupheleni kokufakwa kwe-Windows 10, ukusethwa kweWindows kukushukumisela ukuthi wakhe i-akhawunti yomsebenzisi. Yize iWindows inika isimo somsebenzisi we-Administrator kule akhawunti yomsebenzisi, futhi Inamalungelo cishe onke okuphatha. Kepha ngokuzenzakalela Windows 10 ikhiqiza ngokuzenzakalela enye i-akhawunti ye-Administrator ephezulu noma ephakeme ngesikhathi sokufakwa. Futhi i-akhawunti ifihlekile ngokuzenzakalela ngenxa yezizathu zokuphepha. I- Akhawunti ye-windows 10 yomlawuli eyakhelwe ngaphakathi imvamisa isetshenziselwa ukuxazulula inkinga iWindows. Uma ufuna Finyelela le akhawunti. Lapha lokhu okuthunyelwe sixoxa ngezindlela ezahlukahlukene zoku vumela i-akhawunti ye-administrator windows 10.
Okuqukethwe umbukiso 1 Ungayinika kanjani amandla i-akhawunti yomlawuli windows 10 1.1 Nika amandla i-akhawunti yomlawuli kusuka ku-cmd Prompt 1.2 Kusetshenziswa Abasebenzisi Bendawo Namaqembu 1.3 Nika amandla i-akhawunti yomlawuli kusuka kunqubomgomo yeqembu
Ungayinika kanjani amandla i-akhawunti yomlawuli windows 10
Nazi ezinye izindlela ezehlukene zokunika amandla i-akhawunti yomlawuli windows 10. Ungavumela i-akhawunti yomlawuli usebenzisa i-Command Prompt, usebenzisa Abasebenzisi bendawo namaQembu futhi ungasebenzisa inqubomgomo yokuphepha yasendaweni windows (Inqubomgomo Yeqembu). Masilandele izinyathelo ezingezansi ukunika amandla i-akhawunti yomlawuli 10.
Qaphela: Lezi zinyathelo ziyasebenza nakuma-akhawunti womsebenzisi weWindows 8.1 no-7.
Nika amandla i-akhawunti yomlawuli kusuka ku-cmd Prompt
Nika amandla i-Akhawunti yoMlawuli usebenzisa i-Command Prompt kuwumsebenzi olula kakhulu futhi olula.
Ukuvula uhlobo lwe-command Prompt cmd kusesho lwemenyu yokuqala,
Kusuka kumiphumela yosesho qhafaza kwesokudla kumyalo Prompt khetha ugijime njengomlawuli.
Kopisha le khodi net umphathi womsebenzisi / esebenzayo: yebo bese uyinamathisela kufayela le- umyalo Prompt .
Bese ucindezela u-Enter ukuze nika amandla eyakhelwe ngaphakathi i-akhawunti yomlawuli .
I-akhawunti yoMlawuli eyakhelwe ngaphakathi esanda kunikwa amandla manje isitholakala ngokuchofoza igama le-akhawunti yakho yomsebenzisi ku-Start bese uchofoza i-akhawunti yoMlawuli. Lokhu kulawulwa okufihliwe kuzophinde kuvele esikrinini sokungena ngemvume Windows 10.
Ukukhubaza Uhlobo lwe-akhawunti yoMlawuli eyakhelwe ngaphakathi Umlawuli womsebenzisi we-Net / osebenzayo: cha bese ushaya ukhiye wokungena.
Kusetshenziswa Abasebenzisi Bendawo Namaqembu
Cindezela iWindows + R, thayipha compmgmt.msc futhi kulungile ku-Open Computer Management.
Nweba Abasebenzisi Bendawo Namaqembu bese ukhetha abasebenzisi.
Kwifasitelana elingakwesokudla, uzothola uMlawuli onophawu lomcibisholo. (Lokho kusho ukuthi i-akhawunti ikhutshaziwe.)
Manje Qhafaza kwesokudla ku-Administrator chofoza izakhiwo
Ngaphansi kwe-General Tab ukumaka i-Akhawunti kukhutshaziwe Njengoba kukhonjisiwe isithombe se-Bellow.
Manje chofoza Faka isicelo bese KULUNGILE ukwenza izinguquko zokulondoloza.
ungakhubaza i-akhawunti ukumaka futhi ku-akhawunti kukhutshaziwe.
Nika amandla i-akhawunti yomlawuli kusuka kunqubomgomo yeqembu
Inqubomgomo yeqembu Qaphela Ayitholakali ku-Home And stater Editions.
Ukuvula isihleli senqubomgomo yeqembu lendawo chofoza kumenyu yokuqala bese uthayipha gpedit.msc.
Kumhleli wendawo yenqubomgomo yeQembu lendawo thola ukumiswa kwekhompyutha
Amasethingi eWindows -> Amasethingi Ezokuphepha -> Izinqubomgomo Zendawo -> Izinketho Zokuphepha.
Thola bese uthepha kabili inqubomgomo ebizwa ngokuthi “ama-Akhawunti: Isimo se-akhawunti yomlawuli”.
Manje chofoza kabili kuyo, kuzovuleka okuzivelelayo.
Lapha Khetha Kuvunyelwe bese uqhafaza KULUNGILE ukuyinika amandla.
Khetha Okukhutshaziwe bese uthepha KULUNGILE ukuze kukhutshazwe.
Lezi Izindlela ezihamba phambili zokunika amandla ama-akhawunti we-administrator windows 10, 8.1 no-7 computer, Unemibuzo, isiphakamiso Zizwe ukhululekile ukuphawula ngezansi. Futhi, funda:
Ukuxhumeka kwedeskithophu ekude akusebenzi windows 10 1809
Izindlela Ezihlukile Zokuvula Umyalo Ophakanyisiwe ku-Windows 10
Kuxazululwe: IMicrosoft Edge ayisebenzi ngemuva kokuvuselelwa kwewindows 10 1809
Ungayakha kanjani i-akhawunti yomsebenzisi kumawindi 10 ngaphandle kwe-imeyili
izilungiselelo ze-radeon: uhlelo lokusebenza lokusingathwa
ungawulungisa kanjani umsindo ku-google chrome
vumela i-hibernate windows 10 cmd
ungayilungisa kanjani itunes emawindini 10